Yaaa Maleegay Iskuna Dayay Is Hortagii Fashilmay Ee La Rabay In Lagu sameeyo Wafdigii Kormerayasha Ahaa Ee U Socday Khaatumo (War Sugan) – Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey
Yaaa Maleegay Iskuna Dayay Is Hortagii Fashilmay Ee La Rabay In Lagu sameeyo Wafdigii Kormerayasha Ahaa Ee U Socday Khaatumo (War Sugan)
Home  Khatumo2  Yaaa Maleegay Iskuna Dayay Is Hortagii Fashilmay Ee La Rabay In Lagu sameeyo Wafdigii Kormerayasha Ahaa Ee U Socday Khaatumo (War Sugan)
Khatumo2 taariikh Wararka Waraysi April 20, 2017
Buuhoodle(Allssc): Waxaa Wali In Badan Oo ka mida Bulshada Reer Khaatumo ay is waydinayaan waxa diyarada siday wafdiga ku wajahnaa Magaalada Buuhoodle si ay ugu kuur galan xaladaha ka jira deganka khaatumo.
Wafdigan oo ka koobnaa Dhakhatiir iyo Masuuliyin ka socda Hay’ado Calami ah ayay ahayd in uu la socdo U.S Senate balse aan wafdigan manta ku wehelin.
Wafdigan ayaa ku socday codsi uga yimi Maamulka Khaatumo iyadoo wafdigan manta soo gadhay Buuhoodle uu ka horeeyay Madaxweynaha Maamulka Khaatumo Satate Prof Galaydh kulan kuu kula yeeshay U.S Senate maraykan ah dalka isutaga Imaradka Carabta halkaas oo codsiga Mamulka Khatumo ugu gudbisay Dowlada Maraykanka iyo Hay’ado calami ah.
Wafdigan oo sida loo qorsheeyay ahayd in ay soo maran Dalka Ethiopia iyada oo hore Mamulka Khatumo ogolansho uga qaatay Dalka Ethiopia in diyarada sida wafdigaas ay isticmali karto hawadoda kana dagi karto magalada buuhoodle oo dhacda xadka Somalia iyo Ethiopia. Taas oo ogolanshaheda lagu guulaystay.
Waxaa Iswaydiin leh sidee diyarada Siday wafdiga ay ugu baydhay Magaalada Garoowe?. Diyarada Siday wafdiga oo ahayd mid ka sharciyaysan Dalka Ethiopia uuna wakiil u yahay Xirsi Cabdi Badhi, diyaradaas oo ka mida Diyaradaha ay isticmasho Mamulka Khaatumo ayaa wakhtigan Masuliyinta Khaatumo State u garteen in ay Addis Ababa kasoo qaado Wafdigan, madama diyaradan ay tahay mida sida weyn u taqan Garoonka Ismail Mire Airport.
Nasiib daro Xirsi Cabdi Badhi oo la sheegay in Hanjabaado uga yimadeen Bulbul Camey kaas oo Xirsi ugu hanjabay in diyarada uu wakiilka ka yahay aysan soo fadhisan doonin Garoowe hadii uusan khasab kusoo weecin Diyarada Buhodle u sida Wafdigaas, Waxana jira warar kale oo la xaqiijin in Hirsi Cabdi uu qayb ka ahaa lugoynta dadkiisa taas oo uu kaga doortay dhaqalaha kasoo gala Xafiska Garoowe ee diyarada uu wakiilka ka yahay.
Wafdiga oo aan loo sheegin marida Garoowe ayaa la yaabay Bulbul Camey oo ku sugayay Garoonka Garoowe, waxana Bulbul camey oo wata turjubaano u dhashay Garoowe ay Wafdiga u shegen in ay Garowe ku nagadan balse wafdiga ayaa ka cudur daartay waxana Bulbul camey isku dayay in uu Shaaca ka rido si ay u laabtan ama ugu hoydaan Garoowe.
Wafdigan oo u dhashay Maraykan ayaa Bulbul camey ugu hanjabay in Safarkodan la socoto Safarada Maraykanka ee Dalka Imaradka Carabta iyo Tan Addis Ababa, aysana ka laabanayn wixii ka hor istagana ay noqonayan dambiilayaal ku xad gudbay Sarakiil United Nations ka soc.
Bulbul Camay iyo Kooxdii adeegsanaysay ee C/wali Gaas ayaa wafdiga wadada u baneeyay kuwas oo is hortaga Wafdigan ka qaaday Ceeb iyo Fadeexad kadib markii awododa ay kusoo ururtay in ay carqaladeeyaan Degaha Bini adanimo kuwas oo Bulshada Reer Khatumo ay dareemen Cadawada iyo Nacabka ku jira Besha Cabdiwali Gaas oo iyagu si doqoni magaratay ah u adeegsada Duuf laalo kasoo jeda Deganka Khaatumo.
Iskusoow ada duuboo waxaa malinta bari ah magalada Buuhoodle la filayaa in uu ka dhaco Mudaharado waaweyn kuwaas oo lagaga soo horjedo Cadawada ay muujisatay Mamul Beledka Garoowe.
Tagged featuredwararkawararka xanunada shuban biyoodka buuhoodlewararkii ugu danbeeyay buuhoodlewararkii ugu danbeeyay dhakhatir soo gadhay buuhoodleyaa is hortagay wafdigi u socday mamulka khaatumo